ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော် အငြင်းပွားမှုပဋိပက္ခ | The Christmas Conflict | Real Conversion
ကမ္ဘာဦးကျမ်းထဲက (၆၆)ခုမြောက်သော ဒေသနာ
(SERMON # 66 ON THE BOOK OF GENESIS)
၂၀၁၂၊ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြား
“ထာ၀ရအရှင်ဘုရားသခင်သည် မြွေကိုခေါ်၍ သင်သည် ဤအမှုကို ပြုသော ကြောင့်၊ သားယဉ်သားရဲအပေါင်းတို့ထက် ကျိန်ခြင်းကိုခံရ၏။ သင်သည် ဝမ်းဖြင့်သွား၍ မြေမှုန့်ကိုတစ်သက်လုံးစားရမည်။ သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျိုးအနွယ်ကိုလည်းကောင်း ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်း ကိုကြိတ်လိမ့်မည်။ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာ ၃း၁၄-၁၅)။
ကမ္ဘာဦးကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ဖော်ပြထားသောမြွေသည် ပုံပြင်ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုသာ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူ၍ သင်တွေးလိမ့်မည်ဟု မထင်ပေ။ ကမ္ဘာဦးကျမ်းတော်မြတ်သည် တိကျမှန်ကန်သော သမိုင်းအထောက်အထားများကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့် ၎င်းကျမ်းစာတော်မြတ်ကို ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြွေသည် အမှန်အကန်ရှိခဲ့သော သတ္တဝါဖြစ်သည်။ ဧဒင်ဥယျာဉ်သည်လည်း အဟုတ်တကယ် ရှိခဲ့ပါသည်။ အပြစ်လွန်ကျူးခဲ့သော လူသားအာဒံနှင့်ဧ၀တို့သည် အမှန်တကယ် ရှိခဲ့ကြပါသည်။ အပြစ်သားအာဒံဖြင့် လူသားထုတစ်ခုလုံး အပြစ်သားဖြစ်ကြရသည်။ လုံး၀ဥဿုံ ယိုယွင်းပျက်ဆီးခဲ့ကြရပါသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတော်မြတ်က လူစီဖာအား “ဤလောကတစ်နိုင်ငံလုံးကို လှည့်စား၍ စာတန်မာရ်နတ်အမည်ရှိသော ရှေးမြွေဟောက်နဂါးကြီး” ဟူ၍ (ဗျာဒိတ် ၁၂း၉) ၌ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ စာတန်မာရ်နတ်သည် လူသားဧ၀အား ဖျားယောင်းသွေးဆောင် ခဲ့သဖြင့် ယနေ့ လူသားထုတစ်ခုလုံး အပြစ်ထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဝိညာဉ်မူကား မျက်မြင်မရသဖြင့် စာတန်သည် ဝိညာဉ်အသွင်ဖြင့် ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် စာတန်မာရ်နတ်သည် သက်ရှိသောသတ္တဝါထဲသို့ ဝင်တော်မူခဲ့သည်။ ခရစ်တော် ဤလောက၌ အသက်ရှိထင်ရှားစဉ်တွင်လည်း နတ်ဆိုးတို့သည် ဝက်များထဲသို့ ဝင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ် စာတန်သည် တွားသွားသတ္တဝါထဲသို့ ဝင်တော်မူပြီး လူသားထုတစ်ခုလုံးအား အပြစ်ထဲသို့ ကျရောက်စေခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် စာတန်နှင့်ထိပ်တိုက် ဧဒင်ဥယျာဉ်တော်၌ တွေ့ဆုံစဉ်တွင် စာတန်မာရ်နတ်သည် အပြစ်ကျူးလွန်၏။ အပြစ်ကင်း၏ဟူ၍ပင် စစ်ဆေးခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ စာတန်မာရ်နတ်၌ အပြစ်ရှိကြောင်း သိတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် ထာ၀ရအရှင် ဘုရားသခင်က စာတန်အား၊
“ထာ၀ရအရှင်ဘုရားသခင်သည် မြွေကိုခေါ်၍ သင်သည် ဤအမှုကို ပြုသောကြောင့် သားယဉ်သားရဲအပေါင်းတို့ထက် ကျိန်ခြင်းကိုခံရ၏။ သင်သည် ဝမ်းဖြင့်သွား၍ မြေမှုန့်ကို တစ်သက်လုံးစားရမည်။” (ကမ္ဘာဦး ၃း၁၄)
ဤသို့စာတန်အား အပြစ်ပေးဆုံးမခြင်းကို ပထမလူသားမိဘတို့အဖို့ ခွန်အားရ စေမည် ဖြစ်သည်။ စာတန်မာရ်နတ်သည် သူတို့၏ရန်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ မာရ်နတ်က လူသားတို့အား ပျက်စီးခြင်းငရဲသို့ ကျရောက်စေခဲ့ပါသည်။ စာတန်မာရ်နတ်သည် ထာ၀ရအရှင်ဘုရား၏ ရန်သူဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ထာ၀ရအရှင်ဘုရားသခင်က စာတန်မာရ်နတ်အားခြေမှုန်းရန် “မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်” ကို စေလွှတ်မည်ဟု မိန့်ကြား ခဲ့သည်။ ထိုအရှင်အားဖြင့် စာတန်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး လူသားထု တစ်ခုလုံးလည်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
“သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျိုးအနွယ် ကိုလည်းကောင်း ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။ သူသည် သင်၏ခေါင်း ကိုကြိတ်လိမ့်မည်။ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅)။
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်ထဲက အချက်သုံးချက်ကို ကောက်နှုတ်ပြီး ဟောကြားပါမည်။
၁။	ပထမ၊ မိန်းမမျိုးနွယ်သည် ခရစ်တော်ကို ရည်ညွှန်းသည်။
“မိန်းမမျိုးနွယ်”ဟူ၍ ခေါ်ဆိုခြင်းသည် လူသားဖခင်မပါပဲ မိခင်ဧ၀ဖြင့် ဖေါက်ပွားလာမည်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ “မျိုးနွယ်” ဟူသည်ကား မိန်းမ “မျိုးဥ” ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “မိန်းမမျိုးနွယ်”ဟု ဆိုရာတွင် မိန်းမတစ်ဦး၏သားအိမ်၌ အမြစ်ဆွဲနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤကြိုတင် ဟောချက်သည် နောင်တွင် အပျိုကညာအားဖြင့် ခရစ်တော်အား မွေးဖွားလာမည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ အပျိုကညာမာရိအားဖြင့် မွေးဖွားမြင်မည် ဖြစ်သော်လည်း အပြစ်ဇာတိရှိသူမဟုတ်ပါ။ အပြစ်မှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ရန်လိုအပ်သောသူ လည်း မဟုတ်ပါ။ အပြစ်အမွေခံရသော အာဒံ၏မျိုးဆက် ခရစ်တော်မဟုတ်ပါ။
“ကောင်းကင်တမန်ကလည်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သင်၏အပေါ်မှာ သက်ရောက်တော်မူ၍ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား၏ တန်ခိုးအာနုဘော်တော်သည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ထိုသန့်ရှင်းသောသားသည်လည်း ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ (လုကာ ၁း၃၅)
၂။	ဒုတိယ၊ မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မြွေဆိုးမျိုးနွယ်ကြား မငြိမ်းနိုင်သော ရန်ငြိုးရှိလိမ့်မည်။
“ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်း၊ သင်၏ အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ် ကို၎င်း ငါသည်ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။” (ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅)
ရန်ငြိုးရန်စ ဆန့်ကျင်ဘက်မုန်းတီးခြင်းသည် မိန်းမမျိုးနွယ်နှင့် မြွေဆိုးမျိုး နွယ်ကြား အစဉ်ထာ၀ရ တည်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ (၁၆၉၇-၁၇၇၁) ခုနှစ် ဒေါက်တာဂျွန်ဂီ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “စာတန်နှင့်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်နှစ်ခုကြား အစဉ်မပြတ် စစ်တိုက်ခြင်း၊ အစဉ်သဖြင့်မုန်းပွားခြင်း အမှန်တကယ်ရှိခဲ့သည်။ သင်၏အမျိုး အနွယ်နှင့် မိန်းမအမျိုးအနွယ်ကြား” ဟုဆိုရာတွင်၊ ဝိညာဉ်ဆိုးနှင့် ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲ သောသူတို့အား ခရစ်တော်ဘုရားက မြွေဆိုးအမျိုးနှင့် သူ၏တမန်များဟု ခေါ်တွင် သည်။ ထိုသူများနှင့်နောင်တွင် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်များတို့အား ငြင်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်း၊ ရှိသကဲ့သို့ ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်။” John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume I. p .27; comment on Genesis 3:15).
ယခုအခါတွင် မငြိမ်းနိုင်သောရန်ငြိုးသည် ခရစ်တော်၏လူများနှင့် မာရ်နတ်၏ အပေါင်းအပါတို့သည် တိုက်ခိုက်နေကြပြီဖြစ်သည်။ သခင်ခရစ်တော်က ထိုသူတို့၏ အဘသည် စာတန်မာရ်နတ်ဖြစ်၍ မာရ်နတ်မှ ဆင်းသက်လာကြသူဟူ၍ ရိုးရှင်းစွာ ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်ကဍ
“သင်တို့၏ အဘတည်းဟူသော မာရ်နတ်မှဆင်းသက်ကြ၏။ သင်တို့အဘ၏ အလိုသို့လိုက်တတ်ကြ၏” (ယောဟန် ၈း၄၄)
ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာ ပထမစောင်ကို အကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ကြည့်သော်
“ထိုလက္ခဏာအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားတို့နှင့် မာရ်နတ်၏သားတို့သည် ထင်ရှားကြ၏။ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မကျင့်သောသူ၊ မိမိညီအစ်ကိုတို့ကို မချစ်သောသူ မည်သည်ကား ဘုရားသခင်နှင့်မဆိုင်” (၁ယော ၃း၁၀)
မြွေဆိုးအမျိုးအနွယ်ဟုဆိုရာတွင် “ မာရ်နတ်၏သား” ကိုခေါ်ပါသည်။ မိန်းမ၏ မျိုးနွယ်သည်ကား “ဘုရားသခင်၏သား” ဟုခေါ်ပါသည်။ ၎င်းကို ၁ယော ၃း၁၀ ၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားခြင်းအစသည် ကာဣနက ညီအာဗေလကို သတ်ခြင်းဖြင့် အစပြုခဲ့ပါသည်။ ကာဣနသည် မာရ်နတ်၏သားဖြစ်သည်။ အာဗေလ မူကား မိန်ုးမမျိုးနွယ်ဟု ခေါ်သောခရစ်တော်ဖြစ်ပွားသော သားဖြစ်၏။ သမ္မာကျမ်းစာ တော်မြတ်၌ မိန့်တော်မူသည်ကား
“မိမိညီကိုသတ်သော ကာဣနကဲ့သို့မဟုတ်၊ ကာဣနသည် မိမိညီကို အဘယ်ကြောင့် သတ်သနည်းဟူမူကား မိမိ၏အကျင့်သည် ဆိုးယုတ်၍ ညီ၏ အကျင့်သည် ဖြောင့်မတ်သတည်း” ( ၁ယော ၃း၁၂)။
မာရ်နတ်၏မျိုးနွယ်ဖြစ်သော စာတန်၏သားတို့သည် ခရစ်တော်၏သားသမီး မိန်းမ မျိုးနွယ်အား မနာလိုမုန်းတီးပြီး ဆန့်ကျင်စွာရန်ပြုလျှက်ရှိသည်။ ယေရှုဘုရားက မြွေဆိုးအမျိုးအား “ဤလောကီသားဟူ၍ ခေါ်ဆိုသည်။ ခရစ်တော်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်၌ နေထိုင်မည်ဆိုလျှင် ဤလောကကြီးသည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်တို့အား တိုက်ခိုက်နေ မည်ဖြစ်သည်။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား
“လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကိုမုန်းလျှင် သင်တို့ကိုမမုန်းမှီ ငါ့ကိုမုန်းကြ သည်ကို သိမှတ်ကြလော့။ သင်တို့သည် လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျှင် လောကီ သားတို့သည် မိမိတို့နှင့်ဆက်ဆံသောသင်တို့ကို ချစ်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် လောကီနှင့်မဆက်ဆံ၊ လောကီထဲက ငါရွေးကောက်သောသူဖြစ်သောကြောင့် လောကီသားတို့သည် သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏” (ယောဟန် ၁၅း၁၈-၁၉)။
“သင်တို့သည် လောကီနှင့်ဆက်ဆံလျှင် လောကီသားတို့သည် မိမိတို့နှင့် ဆက်ဆံသော သင်တို့ကို ချစ်ကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် လောကီနှင့် ဆက်ဆံသော လောကီထဲက ငါရွေးနှုတ်သောသူဖြစ်သောကြောင့် လောကသား တို့သည် သင်တို့ကိုမုန်းကြ၏” “လောကီ” သည် မြွေဆိုးမျိုးနွယ် ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏မျိုးနွယ်တော်ဖြစ်သော မိန်းမ၏မျိုးနွယ်ကို သူတို့သည် မုန်းတီး ကြသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ယနေ့ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့သည် ညှင်းပန်း နှိပ်ဆက်ခြင်းကို ခံနေရကြပါသည်။
ထိုအကြောင်းအရာကို ကလေးသူငယ်တို့အား မရှင်းပြပါနှင့်။ အကယ်၍ ထိုကလေးများအထဲက တစ်ဦးဦး စစ်မှန်သောအသက်တာပြောင်းလဲလာပါက ကျန်ကလေးငယ်တို့သည် အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ပြောင်လှောင်နေကြပေမည်။ ထိုသူတို့က ရှေ့ယခင်က မြွေဆိုးသားသမီးတို့ကဲ့သို့ “သင့်ကိုသင် လူစွမ်းကောင်းဟု ထင်ပါသလား”ဍ ဆိုပြီး ခရစ်တော်၏အမျိုးအနွယ်အား မုန်းတီးဆန့်ကျင်နေကြပေ မည်ဖြစ်သည်။ “သင်နှင့်မိန်းမကို၎င်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏အမျိုး အနွယ်ကို၎င်း၊ ငါသည်ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်” (ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅)။ ထို့နည်းတူစွာ အသင်းတော်တော်ရှိ လူကြီးများ၌ပင်လျှင် ပြောင်လှောင်မှုများရှိနေတတ်သည်။ လူငယ်များအထဲကတစ်ဦးသည် စစ်မှန်သောအသက်တာ ပြောင်းလဲသောအခါ သူ၏သူငယ်ချင်းတို့သည် သူအား စွန့်ပစ်တတ်ကြ၏။ အတင်းအဖျင်းကို ပြောတတ်ကြ၏။ သူ၏ အမှားကိုသာရှာကြပြီး မကောင်းကြောင်းကို ပြောတတ် ကြပါသည်။ ထိုသို့ သင်းအုပ်ဆရာ၏သားသားမီးတို့သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုးရွားစွာ ခံစားကြရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်က ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲသောကလေးများ ကလေးဥပုသ်စာဖြေ အတန်းကို လာရောက်တက်ခဲ့ကြ၏။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်၏ သားတို့အား ထိုင်ခုံထောင့်၌ ထိုင်ခိုင်းခဲ့ကြသည်။ ဘာမှမဆိုလောက်သော အမှားကိုရှာလျှက် အပြစ်ရှာခဲ့ကြသည်။ အတန်းပြီးသွားသောနောက်တွင် သင်းအုပ်ဆရာနှင့် ဘုရားသခင်ကိုတန်းပြီး အပြစ်ရှာလေတော့၏။ မည်သူ၏ ကလေးမဆို အခြားတစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့လာသည်နှင့်အမျှ ထိုကဲ့သို့သော ပြစ်တင်ခြင်းကို ခံကြရသည်။ တကယ်တော့ ထိုသူတို့သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များ မဟုတ်ကြ၍ဖြစ်သည်ဍ ထိုသို့သောကလေးတို့အဖို့ ထိုသီချင်းက ရှင်းလင်းပြ သနေပါသည်။
သခင်ဘုရားဘက်၌ မည်သူရှိသနည်း၊ မည်သူအစေခံသနည်း၊
အခြားသောသူများခေါ်ဆောင်လာဖို့မည်သူကူညီမည်နည်း လောကီကိုစွန့်မည့်သူရှိသလား၊ ဒုက္ခဆင်းရဲရင်ဆိုင်ရဲသလား၊
“ သခင်ဘုရားဘက်၌ မည်သူရှိသနည်း၊ )
ကလေးဥပုသ်စာဖြေတန်းထဲ၌ မြွေဆိုးမျိုးနွယ်နှင့် ခရစ်တော်မျိုးနွယ်တို့ အကြားတွင် ရန်ပွားနေကြသည်ကို အသင်းတော်၌ရှိ လူကြီးအများတို့မသိကြပေ။
ကလေးဥပုသ်စာဖြေတန်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးသော လူကြီးတို့သည် ထိုသို့ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက် ခံစားခဲ့ရသည်ကို အမှန်သိကြသည်။ တရားဟောဆရာတို့သည် မိမိတို့အသင်းတော်၌ မယုံကြည်သောသူတို့အား ကြောက်လန့်ကြ၏။ ယနေ့ခေတ် များစွာသော အသင်းတော်၌ရှိသော လူတို့သည် သင်းအုပ်ဆရာကို ဆန့်ကျင် ပုန်ကန်နေကြသည်ကို မသိကြပေ။ ဘုရားကိုချစ်သော သင်းအုပ်ဆရာတို့ ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရခြင်းသည် ခရစ်တော်၏ မျိုးနွယ်တော်မဟုတ်၊ မြွေဆိုး၏ မျိုးနွယ်တော် ဖြစ်ကြသော အသင်းသူ^သား တို့၏ ပုန်ကန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ပျောက်ဆုံး နေသော အသင်းတော်၌ရှိသော အသင်းသားတို့သည် အသင်းတော်သို့ ပြဿနာ ယူဆောင်လာတတ်ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့သဘောထားကွဲလွဲမှုသည် နေရာတကာရှိနေပါသည်။ မည်သည့်လုပ် ငန်းခွင်၌မဆို ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတစ်ယောက်သည် မပြောပလောက်သော မဆိုစလောက်ကိစ္စလေးဖြင့် ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းကို ခံကြရသည်။ အကယ်၍သင်လည်း ထိုသို့သောနေရာ၌ အလုပ်လုပ်မည်ဆိုလျှင် အကျွန်ုပ်ပြောသမျှ သဘောပေါက်ပါ လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်ပြောသည့်အတိုင်းပင် သင်၌မည်သည့်အပြစ်မရှိပဲ အပြစ်တင်ခံနေရ မည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အပြစ်တင်ခံရခြင်းသည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတိုင်း၌ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည်။
ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မည်သို့နည်း၊ အထက်ပါအကြောင်းအရာများ ဝေငှပြီးနောက်တွင် “ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော် အငြင်းပွားမှု ပဋိပက္ခ” ဟူ၍ ခေါင်းစဉ်တပ် ၍ဝေငှပါမည်။ ၎င်းသည် ဝေငှရန်သင့်တော်သောခေါင်းစဉ်ဖြစ်မည်ထင်၏။ အကြောင်းမှာ ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော်နေ့၌ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ပြဿနာရှိနေ၍ဖြစ်သည်။ သတင်း ထုတ်လျှင် အစီရင်ခံသူ ဘီလ်အိုရေ့လ်လီက ၎င်းပြဿနာကို “ခရစ္စမတ်(စ်)စစ်ပွဲ” ဟူ၍ နာမည်ပေးခဲ့၏။ အရှေ့တိုင်းပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခရစ္စမတ်(စ်)သစ်ပင်ဟု ခေါ်ဆိုရန် ငြင်းဆန်၏။ “အားလပ်ရက်သစ်ပင်”ဟု ခေါ်ဆိုရန် အဆိုတင်ခဲ့၏။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးဆရာများစွာရှိပါသည်။
ဘေလီဂရေဟမ်၏လက်ရှိ Decision ၊၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလထုတ်မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါး ၌ခေါင်းစဉ်တပ်ဖေါ်ပြသည်မှာ “ခရစ်တော်ဘုရားဆင်ဆာလူကြီးဖြစ်နေချိန်တွင် အမှန် တရားအတွက် တိုက်ထုတ်ကြစို့” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရေးသားခဲ့သည်။ ထိုဆောင်းပါး၌ မိခင်တစ်ဦးက ပြည်တွင်းစာသင်ကျောင်းသို့ လာရောက်ကြသောမိခင်များ ဘာသာရေး ယဉ်ကျေးမှု အားလပ်ရက်အကြောင်း ပြောကြားကြသည်ကို ဆောင်းပါးရှင်က ရေးသားခဲ့ ပါသည်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော်သည် ဘယ်နေရာမဆို အတူတူပင် ကျင်းပကြသည် မဟုတ်ပါလားဟုမေးရာ “ဟုတ်ကဲ့” ဟူ၍ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ဖြေကြားခဲ့၏။ “အခြားသောအမျိုးသမီးများကဲ့သို့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ကြားပြီး အားလပ်ရက်အကြောင်းကို ပြောဆိုကြ၏။ ထိုအမျိုးသမီးဖတ်ကြားသောစာအုပ်မှာ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းစာအုပ်ကို အိတ်ထဲကထုတ်ပြသေအခါ အိတ်ထဲမှ ပေါက်ကွဲပစ္စည်း ထုတ်လိုက်သည့်ပမာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအခါ ကျောင်းဆရာတစ်ဦးက “အိုး မဟုတ်သေးဘူးဍ ၎င်းစာအုပ်ကို ပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ၎င်းစာအုပ်က စိတ်က သိကအောက် ဖြစ်စေသည်ဟု ပြောခဲ့၏။ အခြားသောစာအုပ်ဆိုလျှင် ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မာကျမ်းစာတော့ ခေါက်ထားလိုက်ပါဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကလေးသူငယ်တို့ရှေ့မှောက်၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရ၏” (Dနခငျငသညယ ၁၂ ၂၀၁၂. ဏ.၄)
ဖလောရီဒါပြည်နယ် ဝင်တာပက်စ်၌ရှိသော အသက်ကြီးသူတို့က မိမိတို့နေ အိမ်တို့၌ ကယ်ရိုသီချင်းသီဆိုခွင့် မပြုခဲ့ကြပေ။ နယူးယောက်မြို့တော်ရှိ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၌ အလုပ်လုပ်ကြသော သူတို့အား ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော် အောင်လံ တံခွန်ကျင်းပခွင့်မရှိကြတော့ပဲ ဟန်နူကတ်စ်နှင့် အိန္ဒိယအမျိုးသားပွဲတော် ဖြစ်သော ဒေဝါလီပွဲတော်ကိုမူကား အားပေးအားမြောက်ခဲ့၏။ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ပလန်ဒို၌လည်း ကျောင်းသုံးခဲတံ၌ “ အရာရာအတွက် ယေရှုသည် အကြောင်းရင်ခံ ဖြစ်၏” ဟူသော စာတန်းကို ရိုက်နှိပ်ခွင့်မရှိပါ။ ကျောင်းတစ်ကျောင်း၌လည်း ကလေးသူငယ်များ “မယ်ရီခရစ္စမတ်(စ်)” ဟူ၍ရေးသားပြီး အီရက်၌ရှိသော စစ်သားတို့ထံ ပို့ခွင့်မရရှိကြပေ။ နယူးယောက်မြို့တော်၌ ဖခင်တစ်ဦးက ကျောင်းအားလပ်ရက်များတွင် မေနိုရက်တ်နှင့် မူဆလင်တို့၏ ကြယ်နှင့်လခြမ်းကို ပြသလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ယေရှုမွေးဖွားခြင်း အကြောင်းကိုမူကား ပြသခွင့်မရှိခဲ့ပါ။ ဗဟိုအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးက ကျောင်းအား လပ်ရက်များတွင် ယေရှုမွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကို ပြသခွင့်တားမြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။ တရားရုံးအမိန့်အရ ကျောင်းအားလက်ရက်များတွင် မေနိုရက်မူဆလင် ကြယ်နှင့်လခြမ်း တို့မူကား ပြသခွင့်ပြု၏ အကြောင်းမှာ ယုဒဘာသာ သို့မဟုတ် အစ္စလာမ်ဘာသာကို ကျောင်းသား^သူများ ထောက်ခံမှုရယူရန် ဖြစ်ပါသည်။ Thန Dနခငျငသည ဆက်လက်၍ဖေါ်ပြသည်မှာ “ကံဆိုးမိုးမှောင်စွာဖြင့် ခရစ္စမတ်(စ်)ရာသီ ပွဲတော်အတွက် တန်းတူစွာထိုကဲ့သို့ ဆင်ဆာတည်းဖြတ်ခဲ့ကြသ၏” ဤအရာတွေသည် အမှန်တရား ပင်ဖြစ်သည်။ နေရာတကာ၌ “မေရီခရစ္စမတ်(စ်)” ဟူ၍ အော်ဆိုခွင့်ပင် မရကြတော့ပြီ။ “ပျော်ရွှင်ခြင်းအားလပ်ရက်”ဟူ၍သာဆိုခွင့်ရှိကြရပေမည်။ လူတစ်ဦး က ကျွန်ုပ်အား ပြောပြခဲ့သည်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ “မေရီခရစ္စမတ်(စ်)”ဟူ၍ ပြန်ထူးသည်ဟု ပြောပြခဲ့ ဖူးပါသည်။ သေချာသည်မှာ မြွေဆိုးမျိုးနွယ်တို့သည် ခရစ်တော်၏မွေးနေ့တော်မြတ် ကျင်းပခြင်း၊ ခရစ္စမတ်(စ်)အားလပ်ရက်များကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်က လူငယ်တစ်ဦးအား ခရစ္စမတ်(စ်)အကြို ညဝတ်ပြုအစည်းအဝေးနှင့် နှစ်သစ်အကြိုညဝတ်ပြုခြင်း၌ သင်တက်ရောက်လာရမည်ဟုပြောသောအခါ ထိုလူငယ်က ကြမ်းတမ်းစွာဖြင့် တိုက်ခိုက်တုန့်ပြန်ခဲ့၏။ ထိုသူတို့က မင်းတစ်ယောက်ဘဲ အာဏာရှင်ပမာ ဘုရားကျောင်းကို အတင်းတက်ခိုင်းတယ်။ ဘုရားကျောင်းတက်ဖို့ထက် စားသောက်၊ ကပွဲသို့သွားရတာပိုကောင်းသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပြောလာရ ခြင်းသည် မည်သည့်နေရာက ဆင်းသက်လာသည်ကို သင်သိမည်ထင်ပါသည်။ဍ ထာ၀ရဘုရားမိန့် တော်မူသည်ကား “သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏ အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျိုးအနွယ် ကိုလည်းကောင်း ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။” မြွေဆိုးအမျိုးအနွယ်သည် “ခရစ်တော်၏ မျိုးနွယ်အား” အစဉ်တိုက်ခိုက်နေမည်ဖြစ်သည်။ အသစ်အဆန်းဟူ၍ တကယ်ကိုမရှိပါ။ မြွေဆိုးအပေါင်းအပါလူတို့က ခရစ္စမတ်(စ်) အကြိုညဝတ်ပြုခြင်းနှင့် နှစ်သစ်ကူးအကြိုည ဝတ်ပြုခြင်း၌ သင်ပါဝင်သည်ကို မလိုလား ကြပေ။ဍ မြွေဆိုးအပေါင်းအပါး၏ တိုက်တွန်းခြင်းကို သင်ယုံကြည်မည်မဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။ဍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ခရစ္စမတ်(စ်)အကြိုနှင့် နှစ်သစ်ကူးညအကြို ဆုတောင်းပွဲ၌ အတူတကွ ပါဝင်လာမည်ကို သင့်အားမျှော်လင့်နေပါသည်။ဍ
ယခုတွင် ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ကျင်းပမည်နည်း၊ “မြွေဆိုး အပေါင်းအပါ”တို့နှင့် မိတ်သဟာရဖွဲ့လျှက် ခရစ္စမတ်(စ်)ပွဲတော်ကျင်းပမှာလား၊ Þအသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ပါဝင်မိတ်သဟာရဖွဲ့ပါမည်လား၊ ထိုအရာက “ခရစ္စမတ်(စ်)စစ်ပွဲ” ပဲမဟုတ်ပါလား။ ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲက ယနေ့တိုင် ပြောင်းလဲခြင်း တကယ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ “သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏ အမျိုးအနွယ် ကိုလည်းကောင်း ငါသည် ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။” မြွေဆိုးမျိုးနွယ်နှင့် မိန်းမမျိုးနွယ်တို့ကြား၌ စစ်ပွဲအစဉ်ရှိနေသည်။ အခြားသောအကြောင်းအရာကိုလည်း ကြည့်ကြအုံးစို့။
၃။	တတိယ၊ ခရစ်တော်သည် စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်၏။
၎င်းကျမ်းပိုဒ်အဆုံး၌ သူသည် သင်၏ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မည်။ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကိုကြိတ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏” (ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅)။
Þဤသည်ကား စစ်ပွဲ၏အဆုံးနိဂုံးဖြစ်သည်။ အဆုံးတွင် စာတန်သည် ဤလောက၌ရှိသမျှသော တန်ခိုးကိုရယူ၍ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ပါသော်လည်း အဆုံး၌ ခရစ်တော်၏ မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်က စာတန်မာရ်နတ်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းက စာတန်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ပြောနေပါသည်။ ခရစ်တော်ဘုရားက ပညတ်တော် ကိုလေးစားပြီး စာတန်အားအနိုင်ယူရန် ကားတိုင်ပေါ်အသေခံပေးပြီး အပြစ်ကို ဖယ်ရှား၏။ အသေခံတော်မူ၏။ ငရဲမှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဍ ခရစ်တော် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်သောအခါ စပါကျန်ပြောထားသကဲ့သို့ “ကိုယ်တော် သည် ပိတ်ထားသောကျောက်ဂူကို ရှန်ဆုံသည် ဂါဇာမြို့ဝင်တံခါးကိုထမ်းရွက်၍ အဝေးသို့ပစ်လိုက်သကဲ့သို့ ကိုယ်တော်လျောင်းတော်မူသည့်တွင်း၀သည် ပွင့်လျှက် ကောင်းကင်တံခါး၀သည်လည်းပွင့်လျှက် မှောင်မိုက်တန်ခိုး၌ ချုပ် နှောင်ခြင်းခံသူတို့အား ဖြေလွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ရှေ့ဟောင်းနဂါးကြီး၏ခေါင်းကို ကြိတ်ပြီဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် စာတန်သည် အဘယ်ကဲ့သို့ တက်နိုင်တော်မူမည် နည်း၊ ခရစ်တော်သည် သူ့အား ချေမှုန်းခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မိန်းမ၏အမျိုးက ရန်သူမာရ်နတ်ကို ချေမှုန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ဍ ဟာလေလုယာဍ ဟာလေလုယာဍ မှောင်မိုက်တန်ခိုးကို အစိုးရသောမင်းအား သူ၏နေရာမှ နှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ “စာတန်သည် ကောင်းကင်ကလျှက်စစ်ကဲ့သို့ ကျဆင်းလာသည်ကို ငါမြင်၏”ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည်မဟုတ်ပါလား၊ ကိုယ်တော်က မြွေဆိုး၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
မြွေ၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိုက်ပြီဟုပြောရာတွင် လုံး၀သေသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှား၏။ အကယ်၍မြွေ၏အမြီး သို့မဟုတ် လည်ပင်းကိုသာ ကြိတ်မည်ဆိုလျှင် မြွေသည် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နိုင်လေ၏။ သို့သော် ကိုယ်တော်က စာတန်အား လုံးလုံးလျားလျား စာတန်နှင့်သူ၏နိုင်ငံကို ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မိန်းမ၏မျိုးနွယ် ခရစ်တော်သခင်သာလျှင် ဒုတိအကြိမ် ဆင်းသက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ဤလောကကို အုပ်စိုးမည်ဖြစ်သည်။ သခင်၏ညာလက်ရုံးဖြင့် သူ၏လူတို့ကိုချီးမြောက်မည်ဖြစ်သည်။ သခင်၏ ခြေတော်မူကား ရန်သူစာတန်ကို နှင်းချေထားမည်ဖြစ်၏။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်လည်း ထိုပျော်ရွှင်မှုအထဲ မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်ဒုတိယအကြိမ် ဆင်းကြွလာသူအား အလေးပြုချီးမွမ်းနေမည်ဖြစ်၏။။ဟကိုယ်တော်သည် ဤလောကကြီးအား အုပ်စိုး ဖို့ရန် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်လာမည်ဖြစ်သည်] မိန်းမ၏အမျိုးအနွယ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပရဒိသုဘုံကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားသည်။ အပြစ်သား တို့မူကား ပျက်စီးခြင်းခံရ၏။ (C. H. Spurgeon, ''The Serpent's Sentence.'' The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1974 reprint, volume XXXVI, pp, 527, 528).
ယခုသင့်အား ကျွန်ုပ်မေးပါရစေ။ မည်သူ၏ဘတ်တော်သားဖြစ်သနည်း၊ သင်သည်မြွေဆိုးမျိုးနွယ်လား။ မိန်းမမျိုးနွယ်ဖြစ်သော ခရစ်တော်ဘက် ၌ရပ်တည်နေပါသလား၊ တစ်ခုခုတော့ ရွေးချယ်လိုက်ပါ။ မည်သည့်အရာက သင့်အတွက် ဖြစ်မည်နည်း ၊ သင့်စိတ်နှလုံးသားက မည်သူ့ဘက်၌ အားသန် နေပါသနည်း ၊ သင်သည် ခရစ်တော်ဘက်တော်သားလား သို့မဟုတ် စာတန်မာရ် နတ်၏ အပေါင်းအဖေါ်လား ၊ ဒီကနေ့မနက် ရောက်ရှိလာကြသော မိတ်ဆွေများ တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ကြပါစို့ဍ မြွေဆိုးမျိုးနွယ်မှ ခရစ်တော်ယေရှုဆီသို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည့်အကြောင်း ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပေးပါသည်။ ယေရှုသည် သင်၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပြီး သင့်အားထာ၀ရအသက်ကို ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည်အောင်မြင်သောသူဖြစ်သည်။ သခင်ထံသို့ တိုးဝင်းချဉ်း ကပ်ပါ။ ကိုယ်တော်အား ကိုးစားပါ။ သခင်၏အသွေးတော်ဖြင့် သင်၏အပြစ်ကို ဆေးကြောခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ထာ၀ရအသက်သည် သင့်အဖို့ဖြစ်၏ဍ သင့်အနာဂါတ် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုပါက အခန်း၏အနောက်ဘက်ဆီသို့ လှမ်းလာခဲ့ကြပါ။ မစ္စတာလီက ကျေးဇူးပြု၍ ဆုတောင်းပေးပါ။
-	တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ ဒေါက္ထ်တာဂရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ၁ယော ၃း၁၀-၁၃ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
- တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (၁၈၃၆- ၁၈၇၉ ခုနှစ်၊ မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၃၆-၁၈၇၉) ခုနှစ် ဖရင့်စစ်အာရ်အာဗါရို သီကုံးရေးသားသော “ ကိုယ်တော်ဘက်မှာ မည်သူရှိ” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။
လုကာ ၁း၃၅၊ ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅
၂။	ဒုတိယ၊ မိန်းမ၏မျိုးနွယ်နှင့် မြွေဆိုး၏မျိုးနွယ်အကြား မငြိမ်းနိုင်သော ရန်ငြိုးရှိလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာဦး ၃း၁၅၊ ယောဟန် ၈း၄၄၊ ၁ယော ၃း၁၀၊ ယောဟန် ၁၅း၁၈-၁၉။
၃။	တတိယ၊ ခရစ်တော်သည် စစ်ပွဲကို အောင်နိုင်သူဖြစ်၏။